Pork rib and Chicken wing
Prawn and Sausage
Happy birthday My sweetheart,you're adorable,darling and wonderful daughter.You light up my life and gave me hope. I want you to know, sweetheart, that my love for you is as magical now as it was on the day you were born.It will last forever,for eternity. Thank you for being my daughter, my confidant and my friend.
Posted by rose of sharon at 5:52 PM No comments: Links to this post
ပန်းပွင့်လေးတွေဟာအချိန်တန်ရင် ကြွေကျမြဲ ညှိးနွမ်းသွားမြဲ ဖြစ်ပေမဲ့ အကြွေစောရှာသော အဖြူရောင် ပန်းပွင့်လေးအတွက် ခုချိန်ထိ နှမြောတသ ကြေကွဲမိနေဆဲ……
သူမလေးအမည်က နှင်းယုခိုင်... အသက်က၂၉နှစ်…. မိဘကိုလုပ်ကျွေးနေရှာနေသူလေး….မောင်ငယ်နှမငယ်လေးများကိုလည်း ကျောင်းထားပေးနေသူ…မိသားစု၏အားကိုးအားထားရာ… ဘဝကို အရှိအတိုင်း ကျေနပ်ရောင့်ရဲလျှက် ပျော်ရွှင်လန်းဆန်း စွာနေတတ်သူလေး…. ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းမြို့ရှိ ဇာထိုးပန်းထိုးစက်ရုံ တခြား မြန်မာ အမျိုးသမီးလေးများ အယောက်၂၀ ကျော်နှင့်လာရောက် အလုပ်လုပ်နေသူလေး…. ညဆိုင်းအလုပ်ဆင်းပြန်လာ အိမ်ပေါ်မှာ အဝတ်တက်လှန်းရင်း ဝရန်တာမှပြုတ်ကျသေဆုံးခြင်း ကံကြမ္မာသည် သူမအပေါ်ရက်စက်လွန်းလှသည်ဟုထင်ပါသည်….သူမနှင့်သူမ၏ အဖော်များ စက်ရုံဝန်းအတွင်းမှာဆောက်ထားသော အဆောင်မှာပင်နေရင်း ညဆိုင်းအလုပ်လုပ်ကြရသည်…. နှစ်နှစ်တစ်ခါ မြန်မာပြည် ပြန်လည်ခွင့်ရကြသည်… သူမတို့ရရှိသောလစာ တစ်လ ဒေါ်လာ ၁၂၀ ကို မိသားစုများက ရန်ကုန်ရှိ စက်ရုံခွဲတွင် ထုတ်ယူကြသည်….. သူမတို့တစ်တွေ အချိန်ပိုအလုပ်ဆင်းရင်းရရှိသော လုပ်အားခများကိုသာ သုံးစွဲကြသည်… ထိုအချိန်ပိုလုပ်အားခများကိုပင် စုထားပြီး ရန်ကုန်အလည်ပြန်ချိန်တွင် မိသားစုများအတွက် လက်ဆောင် ဝယ်သွားကြသေးသည်…. အလုပ်ရုံတွင် နေစရိတ် စားစရိတ် အပြီးအငြိမ်းမို့ ထိုကဲ့သို့စုနိုင်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်…. ကျမ အနေနှင့်တော့ ညဆိုင်းဆင်းရသော ဒီလခက နည်းသည်ဟုထင်ပါသည်… နှစ်နှစ်တစ်ခါမှ အလည်ပြန်ရခြင်းကိုလည်း တစ်နှစ်တစ်ခါ ဖြစ်သင့်သည်ဟုထင်ပါသည်… ဒါပေမဲ့ သူတို့အားလုံးက ကျေနပ်ရောင့်ရဲနေကြသောအခါ ဘေးလူအနေနှင့် ဘာမှမပြောာသာ… သူတို့ထဲတွင် အိမ်ထောင်သည်တစ်ချို့လည်းပါသည်ဟုသိရသောအခါ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရသေးသည်….
သူတို့တွေရှိလို့ရှိမှန်းတောင် မသိခဲ့ရခြင်းအပေါ် လွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပေမဲ့ ဒီမြေပေါ်မှာ ကိုယ့်လူမျိုးများရှိနေခြင်းကို သိရသည့်အတွက်တော့ ဝမ်းသာမိပါသည်… ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေနှင့်ဆုံတွေ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းက သူမလေးသေဆုံးခြင်းဖြစ်နေတာ အလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါသည်… ကျမတို့ ဒီသတင်းကြားရသည့်အခါ ဖုန်းနံပါတ်စုံစမ်း သူတို့လိပ်စာမေးရင်း သွားတွေ့သည့်အခါ သူတို့တွေလည်းပျော်ကြသည်… ရောက်သည့်နေရာမှာပျော်အောင်နေတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်များက ကျမထက်သာကြပါသည်… လန်းဆန်းသောအပြုံးများနှင့်ရိုးသားသောစိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်လေးများကို နှုတ်ဆက်ပြန်လာခဲ့ပြီး အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်ရင်ထဲမှာ စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာဖြင့်….
အဖြူရောင်ပန်းပွင့်လေးများ ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ်ဆိုးများနှင့် နောက်ထပ်မကြုံကြရပါစေနဲ့ဟုဆုတောင်းရင်း….
Posted by rose of sharon at 3:23 PM No comments: Links to this post
အသွင်တူ၏မတူ၏ ရေးဘို့အတွက် Facebook ကနေတဂ်လာတဲ့ အမသက်ဝေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ကျမတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးခရီးအစမှာ အသွင်မတူတာတွေအတော်များခဲ့ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ အချစ်ကိုအုတ်မြစ်ချပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုမို့ ပြဿနာဖြစ်တိုင်း လမ်းခွဲဘို့မစဉ်းစားဘဲ ဘယ်လိုညှိနှိုင်းရင်အဆင်ပြေမလဲ ဆိုတာမျိုးဘဲ စဉ်းစားပြီး ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကြောင့် အိမ်ထောင်သက်ဆယ့်တစ်နှစ်ကျော်လာတဲ့အခါ အသွင်တူတာတွေ အတော်များလာခဲ့ပြီ...
သူမကြိုက်တာကိုယ်မလုပ် ကိုယ်မကြိုက်တာသူမလုပ် နေလာကြရင်း နှစ်ဦးသဘောတူမှ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အတည်ပြုတာ အကျင့်ဖြစ်လာခဲ့ပြီ... တစ်ခုခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားတိုင်း သူသဘောတူပါ့မလား အရင်တွေးပြီး သူသဘောတူနိုင်မဲ့ ကိစ္စမျိုးကိုဘဲ ကိုယ်ရွေးချယ်တတ်ခဲ့တော့တယ်... သူ့ဘက်ကလဲ ဒီအတိုင်းဘဲဆိုတော့ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ အတွေးအခေါ်နဲ့ အယူအဆတွေက ထပ်တူနီးပါး တူလာကြပြီ... ဒီတော့.. အသွင်မတူတာဆိုလို့ ယောင်္ကျားနဲ့ မိန်းမကွဲပြားခြားနားခြင်းရယ် တစ်ချို့အသေးအဖွဲ ကိစ္စတွေရယ်ဘဲ ရှိတော့တယ်...
ကျမတို့နှစ်ယောက်ကို ကြာလေ ရုပ်တွေတူလာလေလို့ သူများတွေကပြောကြတယ်... မိသားစုတွေအတူတူ အပြင်ထွက်ကြရင်လည်း ရုပ်ချင်းဆင်ကြတယ်နော်လို့ တစ်ချို့ကပြောတယ်... ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တူနေကြတယ်လို့ပြောကြတယ်... ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ ခုထိတကယ်တူကြတယ်လို့ သိသိသာသာ မမြင်မိသေးပါဘူး... ဒါပေမဲ့ ခလေးတွေက ကိုယ့်နားမှာနေရင်ကိုယ်နဲ့တူနေပြီး သူ့နားမှာနေရင် သူနဲ့တူနေတာတော့ တကယ်ပါ...
ကျမတို့နှစ်ယောက် အပေါင်းအသင်းခင်တွယ်တတ်တာချင်းလဲ တူပါတယ်...ကျမတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေက မိုးလင်းမိုးချုပ်အိမ်လာလည်တတ်ကြသလို သူ့သူငယ်ချင်းတွေဟာ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကုန်ပြီး... ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေဟာလည်း သူ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကုန်တယ်... အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ စကားပြောနေရရင် ပျော်နေတတ်ကြတာချင်းလည်း တူပါတယ်...
သူများကို ကူညီချင်ကြတာချင်းလည်းတူတယ်... သူများကအကူအညီတောင်းလာရင် မငြင်းချင်ကြတာချင်းလည်းတူတော့ မကူညီနိုင်တဲ့ အကူအညီအတောင်းခံရရင် စိတ်မကောင်းဖြစ် စိတ်ညစ်ကြရတာချင်းလည်းတူပါတယ်... အရင်ကဆို သူငယ်ချင်းတွေကို ပိုက်ဆံတွေချေးထားကြပြီး ပိုက်ဆံပြန်စစ်ကြည့်တော့မှ ဘယ်သူကပိုချေးထားတယ်ဆိုတာ အငြင်းပွါးကြရတယ်... အခုတော့ သူများက ပိုက်ဆံချေးရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရင်တိုင်ပင်ပြီးမှချေးကြဘို့ သဘောတူထားကြတယ်...
ခလေးတွေအတွက်ဘဝကိုပေးဆပ်ထားကြတာချင်းလည်းတူပါတယ်... သူတို့လေးတွေ ကျမတို့ကို မိဘအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ထားရတာကို ဂုဏ်ယူကျေနပ်နေတာမျိုး ကျမတို့နှစ်ယောက်လုံးလိုချင်တယ်... ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို အတင်းအကျပ် မတိုက်တွန်းဘဲ နားလည်အောင်ဆုံးမ သွန်သင်ကြပါတယ်... သူတို့ဆန္ဒတွေကိုလည်း ကျမတို့ကဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အမြဲ အဆင်သင့်ရှိနေတယ်... သူတို့ကျန်းမာရေး.. သူတို့ဘဝရှေ့ရေးကို မထိခိုက်စေမဲ့ သူတို့ဆန္ဒမှန်သမျှကို ကျမတို့ လိုက်လျှောဖြည့်ဆည်းပေးကြတယ်... အိမ်လာလည်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ်တို့လင်မယားနှစ်ယောက် ခလေးတွေကို အလိုလိုက်ကြတယ်ဆိုတာ အိမ်နံရံတွေ အိမ်ထဲကပစ္စည်း အသုံးအဆောင်တွေရယ်ကို ကြည့်တာနဲ့တင်သိသွားကြတယ်... ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်လုံး ခလေးတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝ ပျော်ရွှင်မှုကို တန်ဘိုးထား အလေးပေးပြီး ဖြည်းဆည်းပေးကြတယ်...
အစားအသောက်ခုံမင်ကြတာချင်းလည်းတူတယ်... ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသရောက်ရောက် အဲဒီဒေသက ရိုးရာအစားအသောက်တွေကိုမြည်းစမ်းကြည့် ကြတာချင်းလည်းတူတယ်... အိမ်မှာဆိုရင်လည်း စိတ်ကူးပေါက်ရင်ပေါက်သလို လုပ်စားရတာမျိုးကိုနှစ်သက်တယ်... ကြိုတင်စီမံပြီး မချက်စားဘဲ စိတ်ကူးထဲပေါ်လာတာကို ရှာစား/လုပ်စား ရတာကြိုက်တယ်... ခလေးတွေကလဲ ကိုယ်တို့လိုဘဲ ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရှိတာကို အဆင်ပြေအောင်စားတတ်ကြတယ်...
စကားနိုင်လုတတ်တာချင်းလည်းတူတယ်... ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီး စကားနိုင်လုဖြစ်ရင် စိတ်မရှည်တော့တဲ့သူက လှည့်ထွက်သွားလိုက်တာပါဘဲ (မပြီးနိုင်တော့လို့လေ) ....
ခလေးတွေမပါဘဲနဲ့ ဘယ်မှမသွားချင်တာလည်းတူကြတယ်... ခလေးတွေခေါ်မလာရဘူးလို့ဖိတ်တဲ့ပါတီမျိုးကို ကိုယ်တို့လင်မယား ဘယ်တော့မှမသွားဘူး...
ခလေးတွေနဲ့သူငယ်ချင်းပေါင်း ပေါင်းကြတာချင်းလည်းတူတယ်... ညနေတိုင်းလိုလိုမှာ အတူတူကစားလို့ရတဲ့ဂိမ်းတွေကို သားနဲ့ကိုယ်ကတစ်ဖွဲ့ သမီးနဲ့အဖေဖြစ်သူက တစ်ဖွဲ့ ကစားကြလေ့ရှိတယ်...
ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်လုံး နဂိုထဲက တူနေတာရော နားလည်မှုနဲ့ညှိယူထားတာတွေရောရှိတော့ တော်တော်များများမှာ အသွင်တူနေကြပါတယ်...
အသွင်မတူတဲ့ အသေးအဖွဲလေးတွေကတော့ သွားတိုက်ဆေးတောင့်ကို ကိုယ်ကအောက်ခြေက ညှစ်ယူတတ်ပြီး သူကအပေါ်ပိုင်းကညှစ်ယူလေ့ရှိတယ်... ကိုယ်သွားတိုက်တဲ့ အခါတိုင်းမှာ သူအပေါ်ဘက်က ညှစ်ယူထားလို့ ပုံပျက်နေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးကို ပုံကျအောင် အရင်ပြင်ပြီးမှ အောက်ခြေက ပြန်ညှစ်ယူတယ်... ခရီးသွားရင်လဲ ကိုယ်က အဝတ်အစားကို သွားမဲ့ရက် အရေအတွက်နဲ့ တိုက်ပြီးယူတယ်... အားလပ်ရပ်မှာ အဝတ်လျှော်ရတာတွေ မလုပ်ချင်ဘဲ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် နားချင်တယ်... သူကတော့ အဝတ်ကို နှစ်စုံသုံးစုံလောက်ဘဲ ယူလာပြီး အဲဒါတွေဘဲ လှည့်ဝတ်တော့ မနေနိုင်တဲ့ကိုယ်က သူ့အဝတ်အစားကို သူမသိအောင် ပိုထည့်သွားရလေ့ရှိတယ်... အစားစားရင်လည်းသူကတီဗွီရှေ့မှာဘဲစားချင်ပြီး ကိုယ်ကတော့ ထမင်းစားပွဲမှာဘဲ ထိုင်စားရတာနှစ်သက်တယ်...
အဲဒီအသေးအဖွဲလေးတွေဟာ အချစ်ဝင်နေရင် အပြစ်မမြင်တတ်တဲ့အရာတွေမို့ အပြစ်တင်ချင်စိတ်ဝင်လာရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တခြားအရာလေးတွေနဲ့ ဖြည့်တွေးပေးလိုက်ပါတယ်... အသွင်တူတာရောမတူတာရော ရောနှောနေတဲ့ ကျမတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်သက်တမ်းဟာ ဆယ့်တစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ...
ကျမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ခံယူချက်ကတော့ "အိမ်ထောင်ရေးမှာ အချစ်က အရေးပါတယ်" ဆိုတာပါဘဲ... နားလည်မှုကအရေးကြီးတယ်လို့ အများကခံယူထားပေမဲ့ ကျမအတွက်တော့ အချစ်မပါရင် နားမလည်ပေးနိုင်ပါဘူး...
ချစ်သူအားလုံး ပျော်ရွှင် သာယာဖွယ် အိမ်ထောင်များ ထူထောင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်...
Posted by rose of sharon at 9:10 AM2comments: Links to this post
တင်တင်အေးမုန့်ဟင်းခါး (စားနေချိန်မှာသူငယ်ချင်း လသာည ကိုသတိရမိပါတယ်)
ရန်ကုန်မှာစားခဲ့တာလေးတွေပါ... စာရေးဘို့ ရင်ထဲမှာ အများကြီးရှိနေပေမဲ့ ခုထက်ထိရေးတဲ့ဆီ မရောက်ဖြစ်သေးလို့ အစားအသောက်ပုံလေးတွေဘဲ တင်လိုက်ပါတယ်....
Posted by rose of sharon at 3:17 PM 17 comments: Links to this post
အရမ်းဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်.... ဒီနေ့ဖေဖေ့ရဲ့မွေးနေ့.... ဖေဖေ့ဆီကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ မွေးနေ့နှုတ်ခွန်းဆက်နေကျ.... မနေ့ကရန်ကုန်ကဖုန်းလာတယ်....ဖေဖေနေမကောင်းလို့ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်တဲ့... အမတွေနဲ့ဘဲဖုန်းပြောဖြစ်ပြီး မနက်ဖြန်မွေးနေ့နှုတ်ခွန်းဆက်ရင်း ဖေဖေ့ကိုအားပေးစကားတွေပြောမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတာ...ဖေ့ဖေ့ကိုသတိတွေရပြီးအိပ်လို့လဲမရဖြစ်နေတုန်း ဖုန်းသံမြည်လို့ ထူးလိုက်တော့ ဖေဖေဆုံးသွားပြီတဲ့.... မြန်လိုက်တာ.. ကောင်းကင်ဘုံမှာတနေ့ပြန်ဆုံရမယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ ဖေဖေနေမကောင်းတဲ့အချိန် အနားမှာမပြုစုလိုက်ရတာ ယူကြုံးမရ ဖြစ်မိတယ်...
Posted by rose of sharon at 11:03 AM 36 comments: Links to this post
ွှအချစ်သည်အေးမြသည်.... အချစ်သည်စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်သည်.... အချစ်သည်နားလည်ခွင့်လွှတ်တတ်သည်.... အချစ်သည်အားကိုးထိုက်သူ လေးစားထိုက်သူဖြစ်သည်.... ထိုအချစ်သည်ကျမယောကျာင်္းဖြစ်သည်... ထိုယောကျာင်္းဒီနေ့အသက် ၄၀ ပြည့်သည်.... သူ့အသက်၂၇နှစ်တွင် ကျမတို့နှစ်ယောက်စတင်ဆုံစည်းခဲ့ကြသည်... ချစ်သူသက်တမ်း၂နှစ်အိမ်ထောင်သက်၁၁နှစ် စုစုပေါင်း၁၃နှစ်အတွင်း ဘာမှမကြာလိုက်သလိုခံစားရသည်... သို့သော် ၂၇ နှစ်ရုပ်ရည်နှင့် အသက် ၄၀ရုပ်ရည်ကတော့အနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိပါသည်... မကွာခြားသည်က ကျမတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်ထားရှိသော အချစ်ဖြစ်ပါသည်... ပိုတိုးလာတဲ့ ရင်းနှီးမှု၊ နားလည်မှု၊သံယောဇဉ်များသာရှိပြီး လျော့သွားခြင်းဘာတစ်ခုမှမရှိခဲ့ပါ... ထို့အတွက် အချစ်ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်... အချစ်သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိ.... အချစ်သည် မိန်းမနှင့်သားသမီးများကိုသာ ဦးစားပေးတတ်သည်.... သူ့မိဘများဘက်မှ ကျမအပေါ်ဖိအားပေးမှုများရှိလျှင်လည်း ကျမဘက်မှသာ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးတတ်သူဖြစ်သည်... အချစ်သည်အရက်မသောက် ဆေးလိပ်မသောက်ပါ... (ကျမသာအပေါင်းအသင်းကောင်းလျှင်သောက်ပါသည်၊ ဖဲလည်းရိုက်သေးသည်)... ကျမသောက်လျှင်လည်း မကြိုက်ပါ... အချစ်သည်သဝန်တိုတတ်သည်... အချစ်သည် အလုပ်ကိစ္စ မိသားစုကိစ္စမှလွဲပြီး အပြင်မထွက်တတ်ပါ... (ကျမကတော့ အပြင်ထွက်ရတာနှစ်သက်သည်) ကျမအပြင်ထွက်လွန်းလျှင်လည်း သူမကြိုက်ပါ... အချစ်သည် စာအလွန်ဖတ်သူဖြစ်သည်.... ဖတ်စရာစာအုပ်ရှိနေလျှင် အခန်းအောင်းစာဖတ်တတ်သူဖြစ်သည်... အချစ်ကြောင့် ကျမဘဝအေးချမ်းသည်... အချစ်ကြောင့် ကျမတို့မိသားစုလေး သာယာသည်.... အချစ်က မိသားစုကို လိုလေသေးမရှိအောင် အရာရာဖြည့်ဆည်းပေးသူဖြစ်သည်.... ကျမသူ့ကိုသိပ်ချစ်သည်... ထာဝရချစ်နေပါမည်....
Posted by rose of sharon at 1:23 PM 34 comments: Links to this post
Posted by rose of sharon at 10:18 AM 27 comments: Links to this post